Open History Project Myanmar – လူထုအမှတ်သညာ ပွဲတော် မြန်မာ
လူထုအမှတ်သညာ ပွဲတော် မြန်မာ
Hpa An ဘားအံမြို့
Yangon University ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
The Open History Festival brings out the changes, events, and continuities ofaparticular people from the point of view of the people who experienced them. Through these exhibitions and festivals, different generations learn together about the past. They share their understandings of what happened, why, and what it means for the present and future. The Open History Festivals include art, photography, documentaries, literature, poetry, local arts and crafts, and presentation of research. Through these many angles, means, and points of view, the generations come to understand the plural nature of their experience and society. This also creates stronger connections between generations, as issues that many never discussed are brought out and examined by many eyes.
What happens when we fail to face up to history? We cannot hide from it, or have it hidden from us, We will not haveaclear path for out journey into the future without learning all the lessons history holds. In Myanmar, most of us are not taughtareal, plural history in school. We are not taught social history. We are not taught about the pluralism of our past. We have to learn that on our own.
We believe the past isagateway to the future. We must pass through this gateway on our way to the future. That is why we have created the Open History Project.
“ကျွန်တော်တို့ဟာ သမိုင်းကိုမျက်နှာချင်းမဆိုင်ရဲ ရှောင်လွှဲဖုံးကွယ်နေလို့မရပါဘူး။
သမိုင်းရဲ့သင်ခန်းစာကို ယာညက်သလိုကြေညက်မှ အနာဂါတ်ခရီးကို ဖြောင့်ဖြောင့်သွားလို့ရပါမယ်။
ဒါကြောင့်အတိတ်သမိုင်းဆိုတာ အနာဂတ်ကိုသွားရာ အဝင်တံခါးဝဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်ရဲ့ Open History Project-လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကို ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်”
မျိုးဆက်တွေဆိုတာတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး နားလည်ဖို့ လက်ဆင့်ကမ်းဖို့ ကြိုးစားပါ, Open History Project-Dawei 2019
Open History Project, လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
Magway isadivisional capital in central Myanmar. The city is famous for seasonal crops such as peanuts and sesame. It is known as the Big Oil Pot for the country. It is the university city for middle Myanmar.
Magway City- Exhibition Photos
မကွေးမြို့ – ပြပွဲတွင်ပြသခဲ့သောပုံရိပ်များ
Magway City – Prepares and collects
မကွေးမြို့ – စုဆောင်းနေမှုနှင့် ပြင်ဆင်နေမှုပုံရိပ်များ
Magway City – Festival Photos
လူထုအမှတ်သာညာပွဲတော် မကွေးမြို့ နှင့်ပက်သက်၍ Open History Project – Magway website တွင်ထပ်မံလေ့လာနိုင်ပါသည်
Hpa-an City – ဘားအံမြို့
ဘားအံမြို့တော်သည် ကရင်ပြည်နယ်၏ ရုံးစိုက်မြို့တော်ဖြစ်ကာ သံလွင်မြစ်ကမ်းပါးပေါ်တွင် အရေးပါသော မြို့ဖြစ်ပါသည်။ ဘားအံမြို့သည် ကရင်လူမျိုးများသာမက မွန်၊ ဗမာ၊ ပအို့ စသောတိုင်းရင်းသားအချို့လည်း နေထိုင်ကြသည်။ မြဝတီနယ်စပ်မြို့များသို့သွားရာ လမ်းဆုံမြို့လည်းဖြစ်၍ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေး‌နွေးရာနေရာလည်း ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေးအတွက် အချက်အချာကျသောမြို့လည်းဖြစ်ပါသည်။ ဘားအံမြို့တော်တွင် လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကို ၂၀၁၉ တွင်ကျင်းပခဲ့ရာ ဓာတ်ပုံစုဆောင်းမှုနှင့် ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံး ရရှိကာ ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးအဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးမှုတို့ကြောင့် ဘက်ပေါင်းစုံမှ သမိုင်းချဥ်းကပ်မှု ပိုမိုထိရောက်ခဲ့ပါသည်။
Hpa-an City – Exhibition Photos
ဘားအံမြို့ – ပြပွဲတွင်ပြသခဲ့သောပုံရိပ်များ
Hpa-an City – Prepares and collects
ဘားအံမြို့ – စုဆောင်းနေမှုနှင့် ပြင်ဆင်နေမှုပုံရိပ်များ
Hpa-an Festival Photos
ဘားအံမြို့ – ပွဲတော်ပုံရိပ်များ
လူထုအမှတ်သာညာပွဲတော် ဘာအံမြို့ နှင့်ပက်သက်၍ Open History Project – Hpa-an website တွင်ထပ်မံလေ့လာနိုင်ပါသည်
Dawei City – ထား၀ယ်မြို့
ထားဝယ်မြို့သည် တနင်္သာရီတိုင်း၏မြို့တော်ဖြစ်ကာ အလွန်ထူးခြားလှပသော သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် ရှည်လျားသော ပင်လယ်ကမ်းခြေတို့ကြောင့် အထူးထင်ရှားပါသည်။ ထားဝယ်မြို့သည် အလွန်ရှေးကျသော မြို့တော်ဖြစ်ကာ ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား၊ ယဥ်ကျေးမှု၊ ထုံးတမ်းစဥ်လာတို့ ကြွယ်ဝသော ဒေသဖြစ်ပါသည်။ အနုပညာရှင်များစွာထွန်းကား၍ အသိပညာကိုအားပေးသော မြို့ဖြစ်ပါသည်။ ထားဝယ်မြို့လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကို ၂၀၁၉၊ နိုဝင်ဘာတွင် ကျင်းပခဲ့၍ ပထမဆုံး ကွင်းပြင်တွင်ကျင်းပသော ပွဲတော်ဖြစ်ပါသည်။ ထားဝယ်မြို့ သမိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်ပုံများသာမက ပျောက်ကွယ်လုယဥ်ကျေးမှုများကိုလည်း ပြန်လည်တင်ပြနိုင်ခဲ့ပါသည်။
Dawei City – Exhibition Photos
ထား၀ယ်မြို့ – ပြပွဲတွင်ပြသခဲ့သောပုံရိပ်များ
Dawei City – Prepares and collects
ထား၀ယ်မြို့ – စုဆောင်းနေမှုနှင့် ပြင်ဆင်နေမှုပုံရိပ်များ
Dawei City – Festival Photos
ထား၀ယ်မြို့ – ပွဲတော်ပုံရိပ်များ
လူထုအမှတ်သာညာပွဲတော် ထား၀ယ်မြို့နှင့်ပက်သက်၍ Open History Project – Dawei website တွင်ထပ်မံလေ့လာနိုင်ပါသည်
Pathein City – ပုသိမ်မြို့
ပုသိမ်မြို့သည် အလွန်ရှေးကျသော ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့ဖြစ်ကာ ဧရာဝတီတိုင်း၏မြို့တော်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်၏ ဆန်အိုးကြီးဟုထင်ရှားကာ ပုသိမ်ထီးလုပ်ငန်းကဲ့သို့ ယဥ်ကျေးမှုထုတ်ကုန်များလည်း ရှိပါသည်။ ပုသိမ်မြို့မှတ်တမ်းနှင့် ဓာတ်ပုံများစွာကို ကိုလိုနီခေတ်တွင် မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သကဲ့သို့ ရာဇဝင်များမှ ထုတ်နှုတ်ရေးသားခဲ့သော စာအုပ်များလည်းရှိပါသည်။ ပုသိမ်မြို့တွင် မွန်၊ ကရင် တိုင်းရင်းသားအများစုနေထိုင်ကြသည်။ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကို ၂၀၂၀ တွင်ကျင်းပရန် စီစဥ်ထားပါသည်။
Meiktila City -မိတ္ထီလာမြို့
မိတ္ထီလာမြို့သည် မြန်မာပြည်အလယ်ပိုင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအချက်အချာကျသော မြို့ဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတည်းက မြန်မာပြည်အတွက် စစ်ရေးအရ အဓိကကျသော မြို့လည်းဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့ကို ‌အောက်မြန်မာပြည်နှင့် ကုန်းလမ်းအရ ဆက်သွယ်ပေးသော မြို့လည်းဖြစ်သည်။ ရှမ်း၊ မြန်မာတိုင်းရင်သားများနှင့် အိန္ဒိယ၊ တရုတ်လူမျိုးများ ရောနှောနေထိုင်ကြ၍ ဒဏ္ဍာရီများတွင် နာမည်ကျော်သော မိတ္ထီလာကန်တော်လည်း ရှိပါသည်။ မိတ္ထီလာမြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်ကို ၂၀၂၀ တွင်ကျင်းပရန် စီစဥ်ထားပါသည်။
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကို ၁၉၂၀ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် နှစ်၁၀၀ ပြည့်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ရာပြည့် သဘင်ပွဲကို ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာမှ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာအထိ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကျင်ပရန် ရာပြည့်ကော်မတီမှ စီစဥ်ထားပါသည်။ တက္ကသိုလ် ရာပြည့် အမှတ်သညာပွဲတော်ကို သမိုင်းဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် နှင် ပန်းဆိုးတန်းပန်းချီခန်းမတို့ ပူးပေါင်း၍ ဖွင့်ပွဲတွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပညာရေးစကား၀ိုင်များ ၊ ဟောပြောပွဲများ ၊ ဆွေးနွေးပွဲများပါ၀င်၍ ရှားပါး ဓာတ်ပုံဟောင်းများစွာ ခင်းကျင်းပြသနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဇွန်လလယ်တွင် ဒုတိယပွဲ ကျင်းပရန် စီစဥ်ထားသော်လည်း ကိုဗစ်နိုင်တင်း ကပ်ရောဂါကြောင့် ‌‌ရွှေ့ဆိုင်းထားပါသည်။
လူထု အမှတ်သညာ ပွဲတော် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ
Open History Project Documentary လူထုအမှတ်သညာပွဲတော် မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
Aung Soe Min အောင်စိုးမင်း Art & History
Covid 19 Education ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပညာပေး
The Land of Zwekabin – ဇွဲကပင်မြေကို ချစ်သတဲ့လား
နှစ်ကူးချိန်ခါ ကရင်ရိုးရာ – Kayin Water Festival
သမိုင်းအကြောင်းပြောသော မြို့ကလေး။ ထားဝယ်မြို့။ My Native Town or History Teller, Dawei
Hope of A Fisherman, Director – Htein Lin၊ ကိုတံငါမျှော်လင့်ချက်
သမိုင်းအချိုးအကွေ့ ၊ ရှစ်လေးလုံးနေ့၊ 88 Democracy Uprising in Magway
အန္တရယ်ကြားက ကရင်ရွာကလေးTalagon- တလဂုဏ်
Dawei Traditional Dance – ယန်အက
The Legacy – အမွေ
The Value – တန်ဖိုး
Chasing Devil ကရင်တွေ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကို ဘယ်လိုမောင်းထုတ်သလဲ
Documentary Awards – ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ
Magway City – မကွေးမြို့ ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ
Hope of A Fisherman, Director – Htein Lin၊ ကိုတံငါမျှော်လင့်ချက်၊ ဒါရိုက်တာ – ထိန်လင်း
သမိုင်းအချိုးအကွေ့ ၊ ရှစ်လေးလုံးနေ့၊ 88 Democracy Uprising in Magway – ဒါရိုက်တာ ခိုင်စိုးလင်း
The Legacy – အမွေ၊ ဒါရိုက်တာ – ဇော်ဇော်အောင် (မင်းဘူး)
Hpa-an City – ဘားအံမြို့ ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ
The Land of Zwekabin, ဇွဲကပင်မြေကို ချစ်သတဲ့လား။ ဒါရိုက်တာ – ကျပ်ခိုး
အန္တရယ်ကြားက ကရင်ရွာကလေးTalagon,Endangered Kayin Village Director – Saw Ye Min Paing၊
Dawei City – ထား၀ယ်မြို့ ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ
Dan Yar Myar Ne Kabyar Director- Maw Kin, ဒဏ်ရာများနဲ့ကဗျာ, ဒါရိုက်တာ မော်ကင်း
The Value – တန်ဖိုး ဒါရိုက်တာ – ဝေယံစိုး၊ သန့်ဇင်အောင်
Pathein City – ပုသိမ်မြို့ ဆုရမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်များ
Steps on Ngawun River ငဝန်မြစ်ပေါ်ကခြေရာများ၊ ဒါရိုက်တာ-နေဦးလွင်၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
Trash အမှိုက်၊ ဒါရိုက်တာ-Yagami၊ ပုသိမ်မြို့၊ လူထုအမှတ်သညာပွဲတော်
အတွေးအိမ်မက်၊ အပိုင်း (၁)ဒါရိုက်တာ – ကိုဇော် (KZB)၊ တွဲဖက်ဒါရိုက်တာ – ကိုသီဟ (ပန်းလိပ်ပြာ)
Photo Awards – ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Magway City – မကွေးမြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Aung Shwe Htun (1)
Aung Shwe Htun (2)
Aung Shwe Htun (3)
Khin Mg Lwin (1)
Khin Mg Lwin (2)
Khin Mg Lwin (3)
Ko Hlawn (Phan Khar Myay) (1)
Ko Hlawn (Phan Khar Myay) (2)
Ko Hlawn (Phan Khar Myay) (3)
Kyaw Swar Myo (1)
Kyaw Swar Myo (2)
Kyaw Swar Myo (3)
Nay Chi Nay Win (1)
Nay Chi Nay Win (2)
Nay Chi Nay Win (3)
Nyi Nyi Zaw (1)
Nyi Nyi Zaw (2)
Nyi Nyi Zaw (3)
Shine Yazar Min (1)
Shine Yazar Min (2)
Shine Yazar Min (3)
Thet Paing Soe (1)
Thet Paing Soe (2)
Thet Paing Soe (3)
Toe Toe Aung (1)
Toe Toe Aung (2)
Toe Toe Aung (3)
Ye Chit Paing (1)
Ye Chit Paing (2)
Ye Chit Paing (3)
Zaw Mg Mg Oo (1)
Zaw Mg Mg Oo (2)
Zaw Mg Mg Oo (3)
Hpa-an City – ဘားအံမြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Aung Chan Thar (1)
Aung Chan Thar (2)
Aung Chan Thar (3)
Aung Ko Ko (1)
Ko Ko Aung (1)
Ko Ko Aung (2)
Tin Htut Naing (3)
Kyaw Kyaw Win (1)
Kyaw Kyaw Win (3)
Myat Aye (1)
Myat Aye (2)
Myat Aye (3)
Saw Aung Thaung (1)
Saw Aung Thaung (2)
Saw Aung Thaung (3)
Saw Dee (1)
Saw Dee (2)
Saw Dee (3)
Saw Lin (1)
Saw Lin (2)
Saw Lin (3)
Saw Shaw Htawt (1)
Saw Shaw Htawt (2)
Saw Shaw Htawt (3)
Saw Thein Shoo Htun (1)
Saw Thein Shoo Htun (2)
Saw Thein Shoo Htun (3)
Swe Tun (1)
Swe Tun (2)
Tin Htut Naing (1)
Tin Htut Naing (2)
Aung Ko Ko (2)
Aung Ko Ko (3)
Dawei City – ထား၀ယ်မြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Pathein City – ပုသိမ်မြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
Meikhtila City – မိတ္ထီလာမြို့ဆုရမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
286(1st Floor) Pansodan,